एसडीएफ चुनावी मोडमा, नाथाङ माछोङमा विराट शान्ति जुलुस - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारएसडीएफ चुनावी मोडमा, नाथाङ माछोङमा विराट शान्ति जुलुस
सिक्किममा आज परिवर्तनको कुरा हुँदैछ। तर, के-का लागि परिवर्तन? रोलेपमा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको स्थापना हुनु परिवर्तन हो। आउने वर्षदेखि यहाँ विज्ञानको पढ़ाइ शुरु हुँदैछ, त्यो परिवर्तन हो। रोलेप जस्तो अभेक गाउँमा सड़क पुगेको छ, यहाँ होमस्टेहरू सञ्चालन हुँदैछन्। दिनमा सयौंका सङ्ख्यामा पर्यटकहरूको आगमन हुँदैछ। पाकिममा हवाई अड्डा बनियो। प्रधानमन्त्रीले आएर नाथाङ माछोङ क्षेत्रमा जनसम्बोधन गरे, यो चाहिँ वास्तविक परिवर्तन हो। तर, खुल्ला मञ्चबाट जनतालाई मार्ने, लुट्ने, पार्टी फण्डको नाममा कर्मचारीलाई धम्की दिने चाहिँ परिवर्तन होइन। सिक्किमे जनता यस्तो परिवर्तन चाहँदैनन्-डीटी लेप्चा
पाकिम, 27 दिसम्बरः सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम)-का समर्थक डानियल भोटियाले गत 14 दिसम्बरको दिन जोरथाङमा दिएको वक्तव्यको विरोधमा सत्तारूढ़ एसडीएफ पार्टीले बिहीवार शान्ति ऱ्याली आयोजन गरेको छ। ऱ्यालीले करिब 20 किलोमिटर दूरी तय गरेको थियो।
पूर्व सिक्किमको नाथाङ माछोङमा एसडीएफले आज एउटा विराट् शान्ति र्‍याली आयोजन गरेर डानियल भोटियाको वक्तव्यको खण्डन गरेको हो। क्षेत्र विधायक तथा राज्यका वरिष्ठ मन्त्री डीटी लेप्चाको अगुवाइमा यो र्‍याली आयोजन गरिएको थियो। पाकिम बजारदेखि शुरु भएको र्‍याली पारखा, लिङ्के हुँदै रोलेपमा पुगेर समापन भएको थियो। रोलेपमा एउटा विराट् सभा र प्रीति भोजको पनि आयोजन गरियो। यस अवसरमा एसडीएफ पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा नाथाङ माछोङ निर्वाचन क्षेत्रको चुनाउ प्रचार समितिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केबी चामलिङको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै क्षेत्र विधायक तथा मन्त्री डीटी लेप्चाले भने,“सिक्किमको शान्तिलाई बिथोल्न राजनीतिक पार्टीको रूपमा एउटा शक्तिको सिक्किममा जन्म भएको छ। यस शक्तिले गत 14 दिसम्बरको दिन दक्षिण सिक्किमको जोरथाङबाट सिक्किमे जनतालाई सोझै चेताउनी दिएको छ। त्यसकै विरुद्धमा आजको र्‍याली आयोजन गरिएको हो। एसडीएफ पार्टीले कुनै पनि हालतमा सिक्किमको शान्तिलाई बिथोल्न दिनेछैन। हामी शान्तिको पक्षमा सधैं नै काम गर्दै जानेछौं।” “सिक्किममा आज परिवर्तनको कुरा हुँदैछ। तर, के-का लागि परिवर्तन? रोलेपमा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको स्थापना हुनु परिवर्तन हो। आउने वर्षदेखि यहाँ विज्ञानको पढ़ाइ शुरु हुँदैछ, त्यो परिवर्तन हो। रोलेप जस्तो अभेक गाउँमा सड़क पुगेको छ, यहाँ होमस्टेहरू सञ्चालन हुँदैछन्। दिनमा सयौंका सङ्ख्यामा पर्यटकहरूको आगमन हुँदैछ। पाकिममा हवाई अड्डा बनियो। प्रधानमन्त्रीले आएर नाथाङ माछोङ क्षेत्रमा जनसम्बोधन गरे, यो चाहिँ वास्तविक परिवर्तन हो। तर, खुल्ला मञ्चबाट जनतालाई मार्ने, लुट्ने, पार्टी फण्डको नाममा कर्मचारीलाई धम्की दिने चाहिँ परिवर्तन होइन। सिक्किमे जनता यस्तो परिवर्तन चाहँदैनन्”,मन्त्रीले अझ भने। नाथाङ माछोङ क्षेत्रको विकासमाथि बोल्दै उनले भने,“विगत चार वर्षमा नाथाङ माछोङ क्षेत्रमा धेरै पूर्वाधारहरूको विकास भएको छ। धेरै गर्न बाँकी छन्। आउने चुनाउमा पुनः एसडीएफ पार्टीलाई विजयी बनाएर यी सबै काम पूरा गर्नुपर्छ।” मन्त्री लेप्चा एसकेएममाथि निकै वर्षिए,“नाथाङ माछोङमा एक-दुईजना व्यक्ति जातको साइनो केलाएर अहिले गाउँ घुम्दैछन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग नाथाङ माछोङका जनता सचेत बस्नुपर्छ। यस क्षेत्रमा अहिले 22 घरमा एसकेएम पार्टीको झण्डा छ। यी व्यक्तिहरू को-को हुन् म सबै चिन्छु। आउने चुनाउमा हामीलाई सहयोग गर्ने र विपक्षीलाई सहयोग गर्ने सबैको एल्बम बनाएर म राख्नेछु। विपक्षीलाई सहयोग गर्नेहरूलाई अबउसो एसडीएफको सरकार भएपछि पार्टीले कुनै पनि सहयोग गर्नेछैन। विपक्षीलाई सहयोग गरे हाम्रो पार्टी कार्यकर्तालाई अन्याय हुनेछ। आफ्नै पार्टी कार्यकर्तालाई अन्याय हुने काम म गर्दिन।” चुनाउ सम्बन्धी बोल्दै उनले भने,“2019 को चुनाउमा एसडीएफ पार्टीले पुनः सरकार बनाउनेछ। त्यसमा सिक्किमे जनता निश्चिन्त भएर बस्दा हुन्छ।3जनवरीमा नाथाङ माछोङ चुनाउ प्रचार समितिका अध्यक्ष केबी चामलिङको अगुवाइमा पाकिम पार्टी कार्यालयमा एउटा सभा गरिनेछ। यस सभाले चुनाउ प्रचार अभियानलाई अघि बढ़ाउनेछ। एसडीएफ पार्टी अब चुनाउ प्रचार अभियानमा अघि बढ़ेको हो। यसमा जनताबाट पनि सहयोग हुनुपर्छ।” एसडीएफका दुई उपाध्यक्ष बीएस पन्त र मोहन दुङमालीले एसडीएफ पार्टी त्याग गरेको विषयमा पनि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै मन्त्रीले भने,“पन्त र दुङमालीले एसडीएफ त्याग्नुले पार्टीको पिलो फुटेजस्तो भएको छ। उनीहरू सैद्धान्तिक रूपमा एसडीएफमा थिएनन्। यसैले पिलो फुटेर जाँदा हामीलाई सञ्चो भएको छ।”
सभामा एसडीएफ पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व जिल्लाका पूर्वपञ्चायत अध्यक्ष टीएन काजीलगायत अन्यले पनि सम्बोधन गरेका थिए। सभामा आउने चुनाउमा नाथाङ माछोङ क्षेत्रबाट एसडीएफ पार्टीले डीटी लेप्चालाई नै उम्मेद्वार बनाउनुपर्ने माग उठेको छ भने पार्टी कार्यकर्ताहरूले चुनाउ प्रचार समितिका अध्यक्ष केबी चामलिङलाई लेप्चाको उम्मेद्वारिताबारे पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिङसमक्ष सन्देश पुर्‍याइदिन आग्रह गरे।